तेश्रो फिदिम नगर कप मङ्सिर २८ बाट « Mechipost.com
प्रकाशित मिति: २३ मंसिर २०७८, बिहीबार ०९:५८
पाँचथरको फिदिम नगरपालिका–७ रानीटारमा वर्षेनि आयोजना भइरहेको फिदिम नगर कप फुटबल प्रतियोगिता यस वर्ष मङ्सिर २८ गतेबाट सञ्चालन हुने भएको छ ।
स्वतन्त्र क्लब रानीटारले आयोजना गरेको प्रतियोगिता पुस ३ गतेसम्म सञ्चालन हुने भएको हो । प्रतियोगितामा छिमेकी मुलुक भारतको एक सहित आठ वटा फुटबल टोलीले प्रतिस्पर्धा गर्ने निश्चित भएको आयोजक क्लबले जनाएको छ । प्रतियोगिता फिदिम–७ स्थित बराजु खेलमैदानमा सञ्चालन हुनेछ । प्रतियोगिताको यो तेश्रो संस्करण हो ।
यस वर्षको प्रतियोगितामा भारतको पाण्डा स्पोर्टिङ क्लब सिक्किम सहित चर्च ब्वाइज क्लब काठमाडौं, कर्णसिंह सोनाम स्मृति क्लब ताप्लेजुङ, योङ ब्वाइज फुटबल क्लब इलाम, अलइनवान सैनिक क्लब झापा, रेड स्टार फुटबल क्लब विर्तामोडले सहभागिता जनाउने निश्चित भएको आयोजक स्वतन्त्र क्लबका अध्यक्ष बलबहादुर गुरुङले जानकारी दिनुभयो । प्रतियोगितामा आयोजक सहित जिल्लाकै पाँचथर क्लब फिदिमले समेत सहभागिता जनाउने भएको छ ।
यस वर्ष प्रतियोगिताको बिजेटा समूहले रु. एक लाख ५० हजार पुरस्कार सहित ट्रफी र मेडल प्राप्त गर्नेछ । यस्तै उपबिजेता समूहले रु. ८० हजार पुरस्कार प्राप्त गर्नेछ । प्रतियोगितामा उत्कृष्ट खेलाडी, उत्कृष्ट गोलरक्षक, उत्कृष्ट डिफेन्डर र उत्कृष्ट मिडफिल्डर नगद पुरस्कारले पुरस्कृत हुनेछन् भने प्रत्येक खेलमा उत्कृष्ट खेलाडी घोषणा गरी पुरस्कृत गरिने आयोजक क्लबले जनाएको छ ।
बराजु खेलमैदान रानीटारमा दिउँसो २ बजे खेल सञ्चालन हुनेछ । पुस १ र २ गते भने दुई÷दुई वटा खेल सञ्चालन हुने आयोजकले जनाएको छ । प्रतियोगिताको फाइनल खेल पुस ३ गते हुनेछ । उक्त प्रतियोगिताको सहआयोजकमा रानीटार युनाइटेड क्लब र प्रवद्र्धकमा फिदिम नगरपालिका रहेका छन् ।